"... tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy." Efesiana 5:25
Tsy dia lehibe akory ny tanànako, nefa ahitana fiangonana am-polony. Ary matetika aho no mahare kristiana miresaka ny eglizy-“ny”. Izao anefa no hitako ao amin’ny filazantsara: “Jesosy ho faty … mba hanangona ny zanak’Andriamanitra izay efa niely, ho antoko iray” (Jaona 11:51-52). Marina fa ireo apostoly dia miresaka eglizy maro (izany hoe fanehoana ny Eglizy eo amin’ny tanàna izatsy na izaroa); fa ankoatra izany, ao amin’ny Baiboly, dia matetika no milaza tokana ny voambolana hoe "Eglizy" (adika ihany koa hoe “Fiangonana”). Ary nony nanambara ny hiforonan’io Eglizy io ny Tompo Jesosy, dia nilaza hoe: “Haoriko ny fiangonako” (Matio 16:18). Tamin’ny fiandohan’ny tantarany, voarakitra ao amin’ny Asan’ny Apostoly, “izay rehetra nino dia niray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra” (Asan’ny Apostoly 2:44).
Inona no tokony hotsoahiko amin’izany? Tsy isalasalana fa ny fisaratsarahana dia asan’i Satana, ary isika kristiana dia nanampy azy betsaka, satria nifikitra tamin’ny fitsitokotokoana sy nivily hiala amin’ny fampianaran’ny Baiboly.
Fa ny mahafaly ahy dia ny fahazoako antoka fa Jesosy mihitsy no manorina ny fiangonany ary miantoka ny firaisany sy ny hoaviny. “Tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy”, dia “mamelona sy mitaiza azy” Izy, ary manamasina azy (Efesiana 5:25-29). Izy no manampy isanandro “vato velona” vaovao eo aminy (1 Petera 2:5; Asan’ny Apostoly 2:47). Ary Izy mihitsy no ho avy tsy ho ela haka azy (1 Tesaloniana 4:16) mba hiaraka aminy any an-danitra.
Eny, Eglizy tena vakivaky no asehon’ny kristiana, nefa miezaka aho hahita azy toy ny fahitan’i Jesosy azy, ary miezaka koa hitana ny toerako ao, araka izay ankasitrahin’ny Tompo.
(rahampitso ny tohiny)